हङकङको विकास यो प्रशिक्षण
हङकङ विकासकर्ता साक्षात्कार गर्दै
कुन ह्यापअप विकासकर्ताको बारे हो?
ह्यान्डूप कसरी उपयोगी छ?
ह्यापअप साक्षात्कार तोक्नका लागि सुझाव र चालहरू
Apache Apache एक मुक्त, खुला स्रोत हो। जाभा आधारित प्रोग्रामिङ ढाँचा मूलतया अनुमोदित भण्डारणको लागी योजना बनाइएको छ र जानकारी को humongous माप को तैयारी को रूप मा सामान्यतया बिग डाटा को रूप मा जानिन्छ। यो हडपप र यसको अनुप्रयोगको केहि समय बढ्दो महत्त्वपूर्ण जानकारी योगदान गर्न तपाईंको भागमा प्रेमी छनोटको रूपमा विचार गर्न सकिन्छ ताकि तपाईं Hadoop विकासकर्ता साक्षात्कार भर्न सक्नुहुनेछ।
त्यसोभए उनीहरुसँगको सम्बन्धको बारेमा जानकारी गराईरहनु भएको छ। यसका बारेमा जानकारी गराउनु भएको छ।
घटनामा तपाईं विषयमा पूर्ण रूपमा नयाँ हुनुहुन्छ, हामीलाई Hadoop विकासकर्ताको सट्टा एक उत्पाद विकासकर्ताको अवस्थामा सुरू गर्न दिनुहोस्। वास्तवमा दुवै दुवै कोड र प्रोग्रामिंग कम्पोजि गर्ने आरोपमा छन् कि बीचको एक मात्र विपरित भिन्नता हो। मुख्य विपरीत यो होपप विकासकर्ताले ठूलो डाटा वातावरणमा काम गर्दछ। ठूला जानकारीले पेटभाइट, एक्ब्याइट र जेनेटैबाइटमा मापन गरिएका धेरै मात्रामा जानकारीको बारेमा बताउँछ, जुन अनुप्रयोगहरू तयारी गर्ने कस्टम जानकारीको ह्यान्डल बल भन्दा टाढा छन्।
हजोपपपको सबैभन्दा ठूलो रुचाइएको दृष्टिकोण यो जानकारीको भारी मात्रामा संभाल गर्न सक्छ। पर्यटन, सामाजिक बीमा, निधि, प्रचारकार्यमा काम गर्ने व्यवसायहरू, र त्यसका लागि ह्यापपलाई निरीक्षण गर्न, निरीक्षण गर्ने, तोड्न र जानकारीको पर्याप्त मात्रालाई सम्हाल्न आवश्यक हुन्छ।
एक वैकल्पिक स्तर मा, Hadoop को समान तरिकाले सहनशीलता दोषी छ। यसले यो ढाँचा को रूप मा अपरिभाषित प्रगति को प्रस्ताव को रूप मा एक खोया हब को अवसर मा तेजी देखि अन्य क्षेत्र मा स्थानांतरित गर्दछ।
पहिलो महत्त्वको रूपमा तपाईंलाई विभिन्न प्रोटोटाइपहरू, रूपरेखाहरू, वर्णनहरू, मानकहरू, र त्यसमा धेरै प्रकारको जानकारी चाहिन्छ ह्यापपको रूपमा। सबै अधिक आलोचनात्मक तपाईंसँग यो जानकारी लागू गर्न क्षमता हुनुपर्छ। यसको अतिरिक्त, आफ्नो प्रासंगिक क्षमताओं को तीव्र गति को साथ जो कि तपाईं एक उत्पादक तरिका मा आफ्नो दृष्टिकोण अग्रिम गर्न सक्छन्। आफ्नो ठाउँ संग जान सकिन्छ र आफैलाई यो क्षेत्र मा वर्तमान र अपेक्षित ढाँचाहरु संग ओवरहूल राख्नुहोस्। मनमा राख्नुहोस् त्यहाँ मेहनती कार्यको कुनै विकल्प छैन, र सही सामग्री र लगनशील कामको साथ, तपाइँ प्रभावकारी ढंगले पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ कि कसरी एक शीर्ष स्तरको सहयोगमा Hadoop विकासकर्ताको रूपमा आफ्नो काल्पनिक काम खोज्न सक्नुहुन्छ।